Phenergan® (ဖန်နာဂန်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Phenergan® (ဖန်နာဂန်)
Phenergan® (ဖန်နာဂန်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Phenergan® (ဖန်နာဂန်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Phenergan® (ဖန်နာဂန်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
လှုပ်ရှားရွေ့လျားမှုဆိုင်ရာမူးဝေခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက် သို့ မခွဲခင်အခြေအနေစတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ဆက်နွှယ်တဲ့ မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊အန်ခြင်းတွေကို ကာကွယ်ရာမှာနဲ့ ကုသရာမှာသုံးပါတယ်။
အဖိမ့်ထခြင်း၊ ယားခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ မျက်လုံးအရည်ထွက်ခြင်းစတဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုလက္ခဏာတွေကို ကုသဖို့အတွက်အသုံးပြုပါတယ်။ အိပ်ချင်အောင်၊ ခွဲစိတ်မှုအပြီးသို့မပြီးခင်မပြုလုပ်ခင် ကြွက်သားများပြေလျော့စေအောင်၊ meperidineကဲ့သို့သော စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အနာသက်သာဆေးတွေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များ ပိုကောင်းစေရန်အတွက်လည်း အကူအညီပေးပါတယ်။ အအေးမိခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့နှာရည်ယိုခြင်းကိုကုသဖို့အတွက်လည်း အချိန်တိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Phenergan®ကို ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ အဆုတ်ရောင်ရောဂါ၊ အခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းအောက်ပိုင်းကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းအတွက် အသုံးမပြုပါဘူး။
Phenergan® (ဖန်နာဂန်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသို့ ဆေးညွှန်းစာမှာပါတဲ့အတိုင်း အစာနဲ့တွဲပြီးသို့အစာမပါဘဲ တိတိကျကျအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ နေ့စဉ်၂ြကိမ်ကနေ၄ကြိမ်အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ရွေ့လျားမှုဆိုင်ရာမူးဝေနေမကောင်းခြင်းအတွက် ပထမဆုံးပမာဏကို ခရီးမစခင်မိနစ်၃၀မှ၆၀အတွင်း သောက်ထားသင့်ပါတယ်။
ဓါတ်မတည့်မှုများအတွက် တစ်နေ့တစ်ကြိမ်နေ့စဉ် ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးမှာသောက်နိုင်ပါတယ်။ နေ့အချိန်အသုံးပြုရင် မူးဝေခြင်းကိုရစေနိုင်တာကြောင့် ရှောင်ရှားတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုမပြုလုပ်ခင် တစ်ညကြိုပြီးသို့ ခွဲစိတ်မှုမစခင်လေးမှာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း ဆက်သုံးသွားရနိုင်ပါတယ်။
ဆေးပမာဏဘယ်လောက်များများဘယ်လောက်အချိန်အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကို သင်ကုသနေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
Phenergan® (ဖန်နာဂန်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Phenergan® (ဖန်နာဂန်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Phenergan® သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
အသက်၂နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ အရမ်းငယ်တဲ့ကလေးတွေမှာ ပြင်းထန်တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၊ နဲ့ သေဆုံးခြင်းကိုတောင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေးကလေးတွေအတွက် ဒီဆေးပေးတော့မယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း ဂရုတစိုက်လေ့လာသင့်ပါတယ်။
Promethazine သို့ chlorpromazine, fluphenazine, mesoridazine, perphenazine, prochlorperazine, thioridazine, or trifluperazineကဲ့သို့သော အလားတူဆေးတွေနဲ့မတည့်ဘူးဆိုရင် Phenergan® ဆေး အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Phenergan® (ဖန်နာဂန်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Phenergan® (ဖန်နာဂန်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောကပ်ါလက္ခဏာတွေတွေ့ခဲ့ရင် ဆေးကိုရပ်လိုက်ပြိး ဆရာဝန်ခေါ်သင့်ပါတယ်။
မရေမရာဖြစ်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း၊ အိပ်မက်ဆိုးမက်ခြင်း
မျက်နှာမှာ ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုများထိန်းချုပ်မရခြင်း (ဝါးခြင်း၊ နှုတ်ခမ်းတဆတ်ဆတ်တုန်ခြင်း၊ မျက်မှောင်ကျုံ့ခြင်း၊ လျှာလှုပ်ရှားမှု၊ မျက်တောင်ခတ်ခြင်းသို့ မျက်လုံးလှုပ်ရှားမှုများ)
ပေါက်ပြဲသွေးထွက်လွယ်ခြင်း (နှာခေါင်းသွေးထွက်ခြင်း၊ သွားဖုံးသွေးယိုခြင်း)
ရုတ်တရက်အားနည်းခြင်းနေမကောင်းခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ တုန်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ပါးစပ်အနာများ၊ သွားဖုံးနီခြင်းရောင်ခြခင်း၊ မြိုချရခက်ခြင်း
ပြင်းထန်တဲ့အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ တုန့်ပြန်မှုများ- ကြွက်သားများအလွန်အမင်းတောင့်တင်းခြင်း၊ အဖျားကြီးခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ မရေမရာဖြစ်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်သံများမြန်ခြင်းမမှန်ခြင်း၊ တုန်ခြင်း၊ လစ်ဟာဟာဖြစ်ခြင်း
မရေမရာဖြစ်ြခ်င်း၊ ပြင်းထန်အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုတော့ အသက်ကြီးသူတွေမှာ ပိုတွေ့ရပါတယ်။ အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း။ မျက်နှာ၊နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ လည်ချောင်းရောင်ခြင်းကဲ့သို့သော ဓါတ်မတည့်မှုဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေ တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင် အရေးပေါ်အကူအညီချက်ချင်းရယူသင့်ပါတယ်။
ဘယ်ဆေးတွေက Phenergan® (ဖန်နာဂန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ဒါတွေကို ရှောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ သင်မှီဝဲနေတဲ့ ဆေးစာရင်းတွေကို ဆရာဝန်တွေဆေးဝါးတတ်ကျွမ်းနားလည်သူတွေကိုပြော ပြထားသင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဆေးရပ်လိုက်တာမျိုးတွေဆေးစသောက်တာမျိုးတွေ ဆေးပမာဏပြောင်းတာမျိုးတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အပြန်အလှန်တုန့်ပြန်မှုတွေ ဖြစ်နိုင်တဲ့ဆေးတွေကတော့ အရေပြားလိမ်းဆေး antihistamines(diphenhydramineလိမ်းဆေး၊ ခရင်မ်၊ ဖျန်းဆေး) ၊ metoclopramide
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Phenergan® (ဖန်နာဂန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Phenergan® (ဖန်နာဂန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အောက်ပါကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေနဲ့ အပြန်အလှန်တုန့်ပြန်မှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Tardive Dyskinesiaခန္ဓါကိုယ်လှုပ်ရှားမှုများ ထိန်းချုပ်မရဘဲထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်နေခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Phenergan® (ဖန်နာဂန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အစာချေလမ်းကြောင်းမဟုတ်တဲ့နေရာမှပေးခြင်း- 25 mg အသားဆေးသို့အကြောဆေး၊ တုန့်ပြန်မှုအတွက် အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခြင်း။ ဒီပမာဏကို လိုအပ်မယ်ဆိုရင် ၂နာရီအတွင်း ထပ်တလဲလဲပေးနေရပါမယ်။ နှုတ်မှပေးခြင်းက ဆေးဆက်အသုံးပြုဖို့လိုတဲ့အခါမှသာလျှင် တတ်နိုင်သမျှမြန်မြန်စပေးသင့်ပါတယ်။ ပါးစပ်မှပေးခြင်း- 25 mgပါးစပ်မှ တစ်ကြိမ်။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင် လေးနာရီတိုင်းမှာ ထပ်တလဲလဲပေးနေသင့်ပါတယ်။
စအိုမှပေးခြင်း- 25 mgစအိုမှ တစ်ကြိမ်။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင် လေးနာရီတိုင်းမှာ ထပ်တလဲလဲပေးနေသင့်ပါတယ်။
ပါးစပ်မှ သို့ စအိုမှပေးခြင်း- 12.5 mg အစားမစားမီနဲ့ 25 mgညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတွေမှာ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ပေးရပါမယ်။ 25 mgအိပ်ရာဝင်ခါနီး သို့ 6.25 mg to 12.5 mgနေ့စဉ် သုံးကြိမ် တလှည့်စီပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
အကြောဆေးသို့အသားဆေး- 25 mgကို လိုအပ်မယ်ဆိုရင် ၂နာရီအတွင်းထပ်ခါထပ်ခါပေးသင့်ပါတယ်။
အစာချေလမ်းကြောင်းမဟုတ်တဲ့နေရာမှပေးခြင်း- 25 mg အသားဆေးသို့အကြောဆေး၊ တုန့်ပြန်မှုအတွက် အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခြင်း။ ဒီပမာဏကို လိုအပ်မယ်ဆိုရင် ၂နာရီအတွင်း ထပ်တလဲလဲပေးနေရပါမယ်။ နှုတ်မှပေးခြင်းက ဆေးဆက်အသုံးပြုဖို့လိုတဲ့အခါမှသာလျှင် တတ်နိုင်သမျှမြန်မြန်စပေးသင့်ပါတယ်။ ပါးစပ်မှပေးခြင်း- 25 mgညအိပ်ရာဝင်ခါနီး။ ညနေစာမစားခင် နဲ့ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးအချိန်တွေမှာ
antihistamine effectsအတွက် တလှည့်စီပေးနိုင်ပတယ်။
စအိုမှပေးခြင်း- 25 mgညအိပ်ရာဝင်ခါနီး။ ညနေစာမစားခင် နဲ့ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးအချိန်တွေမှာ
အစာချေလမ်းကြောင်းမဟုတ်တဲ့နေရာမှပေးခြင်း- 25 mg အသားဆေးသို့အကြောဆေး၊ တုန့်ပြန်မှုအတွက် အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခြင်း။ ထပ်ပြီး50 mgထိတိုးပေးခြင်းဖြင့် လိုချင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရနိုင်ပါတယ်။
ပါးစပ်မှပေးခြင်း- 25 mgပါးစပ်မှ တစ်ကြိမ်။ ထပ်ပြီး50 mgထိတိုးပေးခြင်းဖြင့် လိုချင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရနိုင်ပါတယ်။
စအိုမှပေးခြင်း- 25 mgစအိုမှ တစ်ကြိမ်။ ထပ်ပြီး50 mgထိတိုးပေးခြင်းဖြင့် လိုချင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရနိုင်ပါတယ်။
ပါးစပ်မှ သို့ စအိုမှပေးခြင်း- 25 mgမိနစ်၃၀ကနေ ၆၀အတွင်း ခရီးမစခင်၊ အဲ့နောက်မှာတော့ ၁၂နာရီခြားတစ်ကြိမ်လိုအပ်သလို ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပါးစပ်မှ၊ စအိုမှ၊ အသားဆေး၊ အကြောဆေး- 12.5 to 25 mg ၄နာရီမှ၆နာရီတိုင်းလိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ပါးစပ်မှ၊ စအိုမှ၊ အသားဆေး၊ အကြောဆေး- 25 to 50 mg ၄နာရီမှ၆နာရီတိုင်းလိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တတွဲတည်းတိုက်လိုက်တဲ့ opioidsဆေးတွေရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အစာချေလမ်းကြောင်းမဟုတ်တဲ့နေရာမှပေးခြင်း- 25 mg အသားဆေးသို့အကြောဆေး၊ တုန့်ပြန်မှုအတွက် အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခြင်း။ ဒီပမာဏကို လိုအပ်မယ်ဆိုရင် ၂နာရီအတွင်း ထပ်တလဲလဲပေးနေရပါမယ်။ နှုတ်မှပေးခြင်းက ဆေးဆက်အသုံးပြုဖို့လိုတဲ့အခါမှသာလျှင် တတ်နိုင်သမျှမြန်မြန်စပေးသင့်ပါတယ်။ ပါးစပ်မှပေးခြင်း- 25 mgညအိပ်ရာဝင်ခါနီး။5mg ညနေစာမစားခင် နဲ့ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးအချိန်တွေမှာ
စအိုမှပေးခြင်း- 25 mgညအိပ်ရာဝင်ခါနီး။ 12.5 mg ညနေစာမစားခင် နဲ့ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးအချိန်တွေမှာ
ပါးစပ်မှ၊ စအိုမှ၊ အသားဆေး၊ အကြောဆေး- 25 to 50 mg
အစပိုင်း- 25 mgအသားဆေး၊ အကြောဆေး၊ ပါးစပ်မှ သို့ ဆေးတောင့်
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ဆက်လက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ- 12.5 to 50 mg ၄နာရီမှ၈နာရီတိုင်း တစ်ကြိမ်
အများဆုံးနေ့စဉ်ပမာဏက 75 mgထက်မပိုသင့်ပါဘူး။
ကလေးတွေအတွက် Phenergan® (ဖန်နာဂန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက်၂နှစ်နဲ့ ၂နှစ်အထက်- ပါးစပ်သို့စအိုမှ၊ 0.1 mg/kg/dose၆နာရီတိုင်းတစ်ကြိမ် နေ့အချိန်အတွင်းနဲ့
0.5 mg/kg/doseညအိပ်ရာဝင်ခါနီး လိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အသက်၂နှစ်နဲ့ ၂နှစ်အထက်- ပါးစပ်သို့စအိုမှ၊ 0.5 mg/kg (25 mgထက်မပိုဘဲ) ခရီးမစခင်မိနစ်၃၀မှတစ်နာရီကြိုပြီး ၊ ထို့နောက် လိုအပ်သလို၁၂နာရီတိုင်းမှာ သုံးသင့်ပါတယ်။
အသက်၂နှစ်နဲ့ ၂နှစ်အထက်- ပါးစပ်သို့စအိုမှ၊ 0.5 mg/kg (25 mgထက်မပိုဘဲ) တစ်နေ့၄ကြိမ်မှ၆ကြိမ်အထိလိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အသက်၂နှစ်နဲ့ ၂နှစ်အထက်- ပါးစပ်သို့စအိုမှ၊ 0.5 mg/kg (25 mgထက်မပိုဘဲ) ၆နာရီတိုင်းမှာလိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Phenergan® (ဖန်နာဂန်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ဆေးပြားဆေးတောင့်- promethazine hydrochloride
ဆေးထိုးခြင်း- promethazine hydrochloride 25mg in 1Ml
စအိုအတွင်းထည့်သွင်းဆေးတောင့်ပုံစံ- promethazine Hydrochloride 50mg
Phenergan Tablet. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-6606/phenergan-oral/details#uses. Accessed July 25, 2017
Phenergan. https://www.drugs.com/phenergan.html. Accessed July 25, 2017